फेरि बढ्यो खाधपदार्थको मुल्य ! ( विवरण सहित हेर्नुहोस ) – Life Nepali
फेरि बढ्यो खाधपदार्थको मुल्य ! ( विवरण सहित हेर्नुहोस )
गत जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि उच्च देखिएको छ । सो महिनामा दाल तथा गेडागुडी, सुर्तीजन्य वस्तु, मसला, अल्कोहलिक पेय पदार्थ र फलफूल उपसमूहको मूल्य वृ’द्धि उच्च देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनाको वित्तीय स्थिती सार्वजनिक गर्दै सो महिनामा मूल्यवृद्धि उ’च्च देखिएको जनाएको हो । स’मिक्षा अवधिमा वार्षिक वि’न्दुगत उपभोक्ता मुद्रा”स्फीति ४.५४ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रा’स्फीति ६.१६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रा’स्फीति ५.४१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रा’स्फीति ३.८७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ४.४३ प्रतिशत, तराईमा ४.८६ प्रतिशत, पहाडमा ४.१३ प्रतिशत र हिमालमा ४.३४ प्रतिशत मुद्रा’स्फीति रहेको छ ।
२०७६ जेठमा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ७.१० प्रतिशत, ५.८० प्रतिशत, ५.७० प्रतिशत र ६.४६ प्रतिशत मुद्रा’स्फीति रहेको थियो । जेठमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रा’स्फीति ३.९६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रा’स्फीति ५.३२ प्रतिशत रहेको थियो ।
Previous Breaking News : आयो ६.९ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भुकम्प !
Next खुसिको खबर : नेपालमा थप २ सय ८५ जना कोरोना मुक्त भइ घर फर्किए ! ( विवरण सहित )